နျူကလိယ၌လျှင်မြန်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်စဉ်များသည်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြွက်များ (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက် (2011) ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အစာရှောင်ခြင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ
neuroscience ။ 2011 Mar 10;176:296-307.
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Zitzman DL, Smith က KJ, လှံကို LP သို့.
အရက်လေ့လာရေးနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာန, Chapel Hill, NC 27713, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Bowling Centre ကို။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အတွက် Subsecond အတက်အကျ dopamine (dopamine ယာယီ) ကိုအတွက် နျူကလိယ accumbens မကြာခဏအချိန်သော့ခတ်ဆုလာဘ်များနှင့်တွေကိုမှဖြစ်ကြပြီးဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းအရေးပါသည့်သင်ယူမှု signal ကိုပေး။ အဆိုပါ mesolimbic အဖြစ် dopamine စနစ်ကထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများခြင်းကိုသည်းခံ dopamine ယာယီမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားဆုလာဘ်များနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ပြချက်များဝှက်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမတိုင်းတာယနေ့အထိရန် dopamine နိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ယာယီကြပြီ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုအသုံးပြု လျင်မြန်စွာ တိုင်းတာရန်သိသိ voltammetry scan dopamine ထဲမှာယာယီ နျူကလိယ accumbens ယောက်ျားကို core ကို ကြွက်များ (အသက်၏ 29-30 ရက်) အခြေခံမှာခလုတ်အားပြခဲ့ကြကြောင်းအမျိုးမျိုးသောလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်နှင့်အတူ dopamine လွှတ်ပေး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ကြွက်များ။ ကျနော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ dopamine ယာယီအတွက်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. ခဲ့ကြသည် အပျိုပေါက် ကြွက်များ နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့ဆင်တူတဲ့အခြေခံမှုနှုန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည် ကြွက်များ (အသက်၏ 71-72 ရက်ပေါင်း) ။ သို့သော်လူကြီးများနှင့်မတူဘဲ, အပျိုပေါက် ကြွက်များ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြခဲ့ပါဘူး dopamine , အမြင်အာရုံကွားနိုငျနှင့်အနံ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့တင်ဆက်မှုမှာယာယီ။ ဆနျ့ကငျြနောက်ထပ်ကြွက်နှင့်အတူအကျဉ်းအပြန်အလှန်တိုးမြှင့် dopamine နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ယာယီ အပျိုပေါက် နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ကြွက်များ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုတစ်စက္ကန့်အပြန်အလှန်မှာလူကြီးများအတွက် habituated နေစဉ်ကမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များ၏ပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲရှိပါတယ် dopamine ယာယီအတွက် အပျိုပေါက် ကြွက်များ နှင့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ differential ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ဤယာယီ၏ဖြစ်ပျက်မှုအတွက်လူကြီးများအနေဖြင့်အရေးပါသောမတူကွဲပြားထုတ်ဖေါ်။
2011 IBRO ©မူပိုင်။ All rights reserved Elsevier, Ltd. ထုတ်ဝေသည်။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, dopamine, အသစ်အဆန်း, လူမှုရေးအပြန်အလှန်, voltammetry, နျူကလိယ accumbens
dopamine အာရုံခံနှင့် (dopamine ယာယီခေါ်) ကိုရရှိလာတဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ၏ပြင်းစွာတိုက်ပစ်ခတ်ရန်ဦးနှောက်အတွက်သော့ချက်သင်ယူမှု signal ကိုပါဝင်မှထင်နေကြတယ် (Schultz, 2007; Roesch et al ။ , 2010), အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူနှင့်အတူပြင်ပဆုလာဘ်များနှင့်တွေကို interfacing ။ Dopamine ယာယီ (တော်တော်များများ dopamine ပစ်မှတ်ဒေသများတွင်ကောက်ကာငင်ကာပေါ်ပေါက်ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002) နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်မှာပိုပြီးထင်ရှားတဲ့များမှာ (Rebec et al ။ , 1997; Robinson နဲ့ Wightman, 2004), လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်း (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2001; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002) နှင့်ဆုလာဘ် (Roitman et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအခြားကြွက်ချဉ်းကပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်ကူများအတွက်လီဗာကိုနှိပ်အဖြစ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေ, (နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002; Phillips က et al ။ , 2003; Roitman et al ။ , 2004) ။ ထပ်တလဲလဲအကျိုးကိုနှင့်အတူတွဲသည့်အခါထိုမှတပါး, ပုံမှန်အားဖြင့် dopamine ယာယီကျလာသောမကြားနေတွေကိုဒါလုပျနိုငျ (Stuber et al ။ , 2005b; Stuber et al ။ , 2005a; နေ့ et al ။ , 2007), ဒီအာရုံကြောအချက်ပြသင်ယူမှု-သွေးဆောင် plasticity ခြင်းကိုသည်းခံကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ အရေးကြီးတာက, dopamine ယာယီအသံအတိုးအကျယ်ဂီယာ၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အနိမ့်-ဆှဖှေဲ့ကိုသက်ဝင်နိုင်သောအဆင့်မြင့် extrasynaptic ပြင်းအား, extrasynaptic dopamine receptors (အောင်မြင်ရန်Wightman နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2002) ။ ထို့ကြောင့် dopamine ယာယီအာရုံစိုနှင့်ဆုလာဘ်များဝယ်ယူလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မအလားအလာများနှင့်ထူထောင်ဆုလာဘ်တစ်ခုကဦးနှောက် signal ကိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်မှပေါ်လာပါသည်။
အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများခြင်းကိုသည်းခံ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှ Pre-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကနေ ventral striatum တိုးအတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏ဥပမာအားဖြင့်, စကားရပ် (ဥပမာ, Andersen က et al ။ , 1997), မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် binding လူကြီးထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအကြံပြုအချို့လေ့လာမှုများနှင့်အတူ (ကိုးကားနှင့်ဆွေးနွေးမှုအဘို့အတွေ့ Doremus-Fitzwater et al ။ , 2010; Wahlstrom et al ။ , 2010b) ။ ထို့အပြင်, (dopamine အာရုံခံ၏နှုန်းထားများပစ်ခတ်McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009) နှင့် Basal dopamine ပြင်းအား (Badanich et al ။ , 2006; Philpot et al ။ , 2009) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ peaking အလားတူ U-shaped ခါးဆစ်ပြသပါ။ dopamine ယာယီသေး (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်တိုင်းတာအသစ်အဆန်းမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003; Stansfield နှင့် Kirstein, 2006; Philpot နှင့် Wecker, 2008) နှင့်လူမှုရေးရွယ်တူ (Varlinskaya နှင့်လှံ, 2008) အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ယာယီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းတာ (NAc) ပေးနှင့်လူကြီးများအတွက်သူတို့အားသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု။ ကျနော်တို့ (dopamine ယာယီ detect လုပ်ဖို့လိုအပ်သော Spatial နှင့်ယာယီ resolution နဲ့အစာရှောင်ခြင်းစကင်ကိုသိသိ voltammetry တစ်ခုလြှပျစစျ technique ကိုအသုံးပြုခဲ့ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2008) ။ (ကြွက်နောက်ပိုင်းမှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်ဤအသက်အရွယ်ဆွေမျိုးမှာသက်တူရွယ်တူ-ညွှန်ကြားလူမှုရေး interaction က၏တိုးမြှင်အဆင့်ဆင့်ပြကြောင်းပေးထား - ကျနော်တို့အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက်၏ 29 ရက်ပေါင်း 30) တွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်လေ့လာVarlinskaya နှင့်လှံ, 2008) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အကျဉ်းလူမှုရေး interaction ကနေစဉ်အတွင်း dopamine ယာယီတိုင်းတာအဖြစ်အခြေခံမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dopamine ယာယီဖြစ်ပေါ်အစီရင်ခံခဲ့ကြကြောင်းမမျှော်လင့်ဘဲ, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု (များ၏တင်ပြချက်မှာRobinson နဲ့ Wightman, 2004).
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားအားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အမျိုးသားသိပ္ပံ (NIH ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအမှတ် 80-23, နှင့်အညီ, Chapel Hill မှာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီအတည်ပြုခဲ့ကြသည် 1996) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။ အထီး Long ကအီဗန်ကြွက် postnatal နေ့က (PND) 21 မှာလေးယောက်အလိုက်အတွက်ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Raleigh, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်တစ်ဦးချင်းအစားအသောက်နှင့်ရေနှင့်အတူဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့သျောခဲ့သည် ကြော်ငြာ libitum။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်များတွင်မှအကြွက်များနှစျယောကျ PND 26 (67 ±2ဂရမ်) နှင့် PND 29 သို့မဟုတ် 30 (76 ±3ဂရမ်) ရက်နေ့တွင် voltammetric တိုင်းတာပေါ်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစ်စုနှင့်ယူခဲ့ခွဲစိတ်ဖို့တာဝန်ကျတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်များတွင်မှအကျန်ရှိနေသေးသောနှစ်ခုကြွက်ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအုပ်စုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် PND 68 (379 ± 12 ဂရမ်) နှင့် PND 71 သို့မဟုတ် 72 (379 ± 14 ဂရမ်) ရက်နေ့တွင် voltammetric တိုင်းတာပေါ်ခွဲစိတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 30 - ဤကြွက် PND 63 ထံမှသျော pair တစုံရှိကြ၏။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အဆိုပါခွဲစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများများမှာ (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2009) ကိုအောက်ပါချွင်းချက်အတူ။ ကြွက် isoflurane နှင့်အတူ anesthetized ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် 3% မှာသွေးဆောင်ခြင်းနှင့် 1 မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် - ခွဲစိတ်စဉ်အတွင်း 1.5% အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် 5% မှာသွေးဆောင်ခြင်းနှင့် 2% မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်နေစဉ်။ ကြွက်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, NAc အထက်တွင်လမ်းညွှန် cannula, အ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးစိတ်ကြွလှုံ့ဆော်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်တစ်ဦး Ag / AgCl ရည်ညွှန်း၏ implantation များအတွက် stereotaxic ဘောင်အတွင်းလုံခြုံခဲ့ကြသည်။ လမ်းညွှန် cannula များအတွက် (မီလီမီတာအတွက် bregma နှိုင်းယှဉ်) ကိုသြဒီနိတ် 1.3 anterior နှင့် 1.6 နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (ဆယ်ကျော်သက်) သို့မဟုတ် 1.7 anterior နှင့် 1.7 နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (မီလီမီတာအတွက် bregma နှိုင်းယှဉ်) ကိုသြဒီနိတ်6posterior, 4.1 နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (ဆယ်ကျော်သက်) သို့မဟုတ် 1.3 posterior, 5.2 နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) မှာထောင့်ဒီဂရီတစ် 1.2 မှာထညျ့ခဲ့သညျ။ Postoperatively, ကြွက်များကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နဲ့ Ibuprofen (15 မီလီဂရမ် / နေ့စဉ်ကီလိုဂရမ်, po) နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Dopamine လွှတ်ပေးရန်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းစကင်ကိုသိသိ voltammetry အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည် (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2009) ။ Voltammetric အသံသွင်းနေတဲ့ထုံးစံကိုတည်ဆောက် Plexiglas အခန်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကြမ်းပြင်အာကာသထောင့်ဒီဂရီတစ် 21 မှာထရံကိုဆန့်ကျင်စင်တီမီတာ 21 မှကြမ်းပြင်ကနေတိုးချဲ့ထားတဲ့စောင်းနေသောထည့်သွင်းနှင့်အတူ 10 × 48 စင်တီမီတာရှိ၏ ဒီအခနျး၏မွို့ရိုးကိုဆန့်ကျင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် headstage စည်းဝေးပွဲကိုနှိပ်ကနေကြွက်တားဆီး။ 15 မိ - ။ ကာဗွန်-ဖိုင်ဘာလမ်းညွှန် cannula မှတဆင့် NAc core ကိုသို့လျှော့ချ, ပြီးတော့ 20 အဘို့ဘေးလွတ်သော left နေစဉ်ကြွက်ကို manually စဲခဲ့သည်2မိသဘာဝကျကျ-ဖြစ်ပေါ် dopamine ယာယီနှင့်လျှပ်စစ် evoked dopamine လွှတ်ပေးရေး (-4ပဲမျိုးစုံ, 16 - 24 Hz, 40 μA, 60 msec / အဆင့်, biphasic 120) ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကဲဖြတ်ရန် - ယင်းနောက် voltammetric အသံသွင်းတိုင်း2လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကလျှပ်ကူးပစ္စည်း dopamine ဆိပ်ကမ်းအနီးနေရာယူထားခဲ့မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးတာနဲ့စမ်းသပ်မှုစတင်; အခနျးထဲမှာကနဦးနေရာချထားပြီးနောက် 60 မိ - ဤပုံမှန်အား 85 ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းတင် 50 မိဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်သူအိမ်သားအလင်းချွတ်, သေံ, အဖြူရောင်ဆူညံသံ, အုန်းသီးအနံ့နှင့်သံပုရာအနံ့: ပထမဦးဆုံး 25 မိစဉ်အတွင်း5လှုံ့ဆော်မှုကျပန်းနိုင်ရန်အတွက် 3-မိကြားကာလမှာ5s အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအနံ့ (အောက်ပါထုံးစံ၌ပေးအပ်ခဲ့ကြRobinson နဲ့ Wightman, 2004၃) ကြွက်၏နှာခေါင်းမှ ၂ စင်တီမီတာအကွာအဝေးကို ဖြတ်၍ အခန်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်သည်။ ) ။ လှုံ့ဆော်မှုများအားလုံးကိုတင်ပြပြီးနောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် ၅ မိနစ်ကြာသည်။ ထို့နောက်နောက်ထပ်အီဗန်ကြောင်အထီးကိုစမ်းသပ်ဆဲကြွက်နှင့်အတူ ၆၀ အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးကြွက်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အုပ်စုအတွက်, ကြွက် conspecific ကြွက်စမ်းသပ်ကြွက်မှအသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်ရှိ၏ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်မိတ်ဖက်သည်အနည်းငယ်သောသေးငယ်သည့်အရွယ်ရောက်သူ (စမ်းသပ်ကြွက်အလေးချိန်၏ ၈၇% မှ ၆%) အားပြင်းထန်သောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမဖြစ်အောင်တားဆီးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်အတူတကွမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ဒုတိယ ၆၀ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကာလဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့နောက်ကြွက်တွေကိုသေစေနိုင်လောက်တဲ့ Urethane (> 1 g / kg, ip) ကိုပေးပြီး formalin solution နဲ့ရောအောင်လုပ်တယ်။ ဦး နှောက်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ အေးခဲစေခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း (အနံ ၄၀ μmအထူ) နှင့်မှတ်တမ်းတင်သည့်နေရာများကိုဆုံးဖြတ်ရန် thionin ဖြင့်ဆေးကြောခဲ့သည်။
အသံဖမ်းစဉ်အတွင်း Dopamine ယာယီကစာရင်းအင်း (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2009) ။ အကျဉ်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ voltammetric စကင်ကိုနောက်ခံ-နုတ်ထားပါနှင့်လျှပ်စစ်-evoked dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်ဦး template ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ၏မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်ဟာ signal ကို dopamine ၏အကျယ်ချဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု ([DA] ဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးဆုံးဖြတ်ရန်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်max ကို) နှင့်နောက်ခံအနုတ်သုံး 10 Scan ဖတ် (1 s) ကိုအတွက် RMS လွှဲခွင်အဖြစ်တွက်ချက်အသံဗလံ။5သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးအစားနှင့်အတူသာလျှင် dopamine ယာယီလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ပြချက်များစဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ရန်, ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းဟာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ဆက်မှုလွှမ်းခြုံနေတဲ့ 20-s ကိုကာလအဘို့တွက်ချက်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းတင်ပြချက် (Basal) ရှေ့အပု4မိစဉ်အတွင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ရန်, ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းဟာအပြန်အလှန်ကာလလွှမ်းခြုံထားတဲ့ 80-s ကိုကာလအဘို့တွက်ချက်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းအပြန်အလှန် (Basal) ရှေ့အပု4မိစဉ်အတွင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ dopamine လွှတ်ပေးရန်အဖြစ်အပျက်၏အကျယ်ချဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု (μM) အားလက်ရှိ (Na) converting အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏စံကိုက်ညှိ (Logman et al ။ , 2000).
(ထိုတင်ပြချက်တွင်အောက်ပါ2s ကိုတင်ဆက်၏စတင်ထံမှ) တင်ပြချက်များလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု0တစ်စကေးအပေါ်ဗီဒီယိုမှ rated ခဲ့သည် -3(0 မရှိလှုပ်ရှားမှု; 1, sniffing / ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို; 2, တိမ်းညွတ်လှုပ်ရှားမှု / ထိတ်လန့်; 3, ရွေ့လျား) ။ လူမှုရေးအပြန်အလှန်အခြားကြွက်ဆီသို့ညွှန်ကြားအောက်ပါအပြုအမူတွေ့အတွက်ခြုံငုံကြာချိန်အဖြစ်သွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: မြောကျမတို့ sniffing, လိုက်စား, ano-လိင်အင်္ဂါစစ်ဆေးရေးအောက် / ကျော်တက်ပြီး။ စမ်းသပ်မှုအခနျးထဲသို့မိတ်ဖက်ကြွက်ထည့်ပြီးနောက်အသံ-attenuating အခန်းထဲကတံခါးကို၏ 45 s ကိုချက်ချင်းအောက်ပါပိတ်သိမ်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်လူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်သွင်းယူကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဤအချိန် span အခနျးတံခါးများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်မဆိုသဖွငျ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှရှောင်ရှားရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုလည်းအတူတူပင် 45-S ကာလအတွင်း quadrant ဖြတ်မှတဆင့် Non-လူမှုရေး locomotor လှုပ်ရှားမှု s ကိုအတွက်ကြာချိန်များအတွက်သွင်းယူခဲ့ကြသည်။
အုပ်စုများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေများအကြား dopamine ယာယီအကြိမ်ရေ၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ nonparametric multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည် (Poisson ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ genmod လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများနှင့် Wald pairwise ထူးခွားသညျ့; SAS, SAS Institute မှ Inc ကသုတေသနတြိဂံပန်းခြံ, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား) ။ အုပ်စုများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲယုဂ်အကြား dopamine ယာယီနှင့် signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုး၏လွှဲခွင်ထဲမှာအပြောင်းအလဲများ gamma ဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူအလားတူဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်အစီအမံတွဲ t-စမ်းသပ်မှု (GraphPad Prism ကို, GraphPad ဆော့ဝဲ Inc ကို,, La Jolla, CA) ကို အသုံးပြု. အကြိမ်ကြိမ်-အစီအမံ 2-လမ်း ANOVA အသုံးပြု. သို့မဟုတ်အုပ်စုများအတွင်းအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
တကျိပ်နှစ်ပါးသောဆယ်ကျော်သက်ဆယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သုံးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ခွဲစိတ်မှာသို့မဟုတ် voltammetry စဉ်အတွင်းကြောင့်အခက်အခဲမှမပါဝင်ခဲ့ကြသည်များနှင့်တဦးတည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ကြောင့်တစ်ဦးမမှန်ကန်ကြောင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားရန်မပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တဦးတည်းဆယ်ကျော်သက်ကနေလူမှုရေးအပြန်အလှန် data တွေကိုကြောင့်အခြားစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ပြချက်များကိုထိခိုက်မ voltammetric အခက်အခဲများမှစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်လုပွဲဎရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များနှင့်9မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူမှုရေး interaction ကအတှကျ9လူကြီးများအတွက် 8 မြီးကောင်ပေါက်နှင့်9လူကြီးများခဲ့ကြသည်။
အခြေခံမှာ Dopamine ယာယီ
dopamine ယာယီ၏ Basal နှုန်း NAc core ကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြားထပ်ခဲ့ကြသည်။ ယာယီအကြိမ်ရေအားလုံးအခြေခံနမူနာ (အဘယ်သူမျှမနှိုးဆွတင်ပြချက်များသို့မဟုတ်ကြွက် interaction ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောဖိုင်များ) ကိုဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အခါ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် 1.5 ± 0.4 ယာယီ / မိနစ်နှင့်လူကြီးများ 2.5 ± 0.6 ပြပြ။ ယခင်ကရင့်ကျက်ကြွက်အစီရင်ခံအဖြစ်သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုတစ်စုအတွင်း (ယာယီကြိမ်နှုန်းတစ်ခုအကွာအဝေးခဲ့သည်ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2009; Robinson နဲ့ Wightman, 2007; Wightman et al ။ , 2007): မိနှုန်း 0.2 ယာယီ - - လူကြီးများအတွက်အကွာအဝေး 4.0 ခဲ့စဉ်မိနစ်နှုန်း0ယာယီမြီးကောင်ပေါက်အတွက်, Basal အကြိမ်ရေ 5.0 ထံမှမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ အရေးကြီးတာက, လျှပ်စစ်-stimulation လွှတ်ပေးရန် Basal dopamine ယာယီပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောခဲ့ကြသည်ပင်အခါ voltammetric မှတ်တမ်းတင် site ကိုမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ dopamine ဆိပ်ကမ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်မှာ Dopamine ယာယီ
Next ကိုကျနော်တို့ dopamine ယာယီဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများမျှော်လင့်မထားတဲ့တင်ဆက်မှုမှာဖြစ်ပေါ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ပုံ 1A လှုံ့ဆော်မှု၏အကျဉ်းတင်ပြချက်များအရွယ်ရောက်ကြွက် (အရွယ်ရောက်အခြေခံ vs. လှုံ့ဆော်မှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်, p <50) တွင် 0.05%% dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသထားတယ်Robinson နဲ့ Wightman, 2004) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်စဉ်များ၏နှုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များ (ဆယ်ကျော်သက်များ၏အခြေခံနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ vs. ၀ ဲလတ်၊ p> 0.86) အကြားသိသိသာသာမပြောင်းလဲပါ။ အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ, အခြေခံနှုန်းထားများ (လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းနှုန်းထားများအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် (ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဝေါလ်ဆန့်ကျင်ဘက်, p <0.19) ရှိစဉ်ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူအခြေခံ, p> 0.05 ၏ဝေါ့ဆနျ့ကငျြဘ) ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များသည်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအချိန်နှင့်အမျှတားဆီးနိုင်သည့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူ ၈/၉ သည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုအနည်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြမှုတစ်ခုသို့ပြသခဲ့သည်။ အချိန် - သော့ခတ် dopamine ယာယီပြသထားသောအရွယ်ရောက်ကြွက်များသည် ၃.၈ - ၄.၄ လှုံ့ဆော်မှု (ပျမ်းမျှ ၄) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အချိန် - သော့ခတ်ယာယီယာယီပြသသောမြီးကောင်ပေါက်များသည် ၂.၃ ± ၄.၄ လှုံ့ဆော်မှု (ပျမ်းမျှ ၂) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် dopamine ယာယီအကြိမ်ရေခုနှစ်တွင် (က) လှုံ့ဆော်မှုများတင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း Basal နှုန်းထားများအနေဖြင့်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြ, dopamine ၏ကြိမ်နှုန်း ...
ကျနော်တို့လာမယ့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ပြချက်များကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ယာယီအခြေခံစဉ်အတွင်းတွေထက်ပိုကြီးတဲ့ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံ 1B dopamine ယာယီအလွန်များသောပြင်းအား၏ဖြန့်ဖြူးပြသထားတယ်။ Regression analysis သည်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကြွက်များအကြားပြင်းအားသည်ကွဲပြားမှုမရှိကြောင်း (Wald နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် p အားလုံးတန်ဖိုးများ> 0.05) ကွာခြားမှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းယာယီကာလ၏အများဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုအခြေခံနှင့်သူတို့ထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဘူး။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dopamine ပြင်းအားသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုတင်ပြမှုများအရစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှု (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှု၏ဝေါ့ဒ်ဆန့်ကျင်မှု၊ p <0.06) တွင်အနည်းငယ်မြင့်မားခဲ့သည်။ dopamine ယာယီပျမ်းမျှနှင့်ပျမ်းမျှပြင်းအားကိုဖော်ပြထားသည် စားပွဲတင် 1.
နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ၏အကျယ်ချဲ့ပြင်းအားဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏အမာခံ accumbens ။
အုပ်စုတစုဒေတာ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်နှိုင်းယှဉ်လူကြီးများအတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ပြချက်များမှာဖြစ်ပေါ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းကိုညွှန်ပြသော်လည်း, တစ်ဦးချင်းကွက်လှုံ့ဆော်မှုကြားတွင်အဖြစ်အုပ်စုများအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုသရုပျဖျော။ ပုံ 1C ကြောင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရှေ့အအခြေခံ၏ 4-မိနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက်အပြောင်းအလဲပြသထားတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ယင်းလှုံ့ဆော်မှု dopamine ယာယီနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုအတွက်ကွဲပြား; အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့အများဆုံးကနေအနည်းဆုံးမှထိရောက်သောအဆင့်နေကြသည်: dopamine ယာယီအုန်းကြိုင်မှာ Basal နှုန်းထားများ၏ 208% မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်; သေံမှာ 184%; သံပုရာအနံ့မှာ 161%; အဖြူဆူညံသံမှာ 142%; အလင်းထွက်မှာ 91% ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှု dopamine ယာယီဖြစ်ပေါ်အောင်ခြုံငုံလျော့နည်းထိရောက်သောကြ၏ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့အများဆုံးကနေအနည်းဆုံးမှထိရောက်သောအဆင့်နေကြသည်: dopamine ယာယီသည့်လေသံမှာ Basal နှုန်းထားများ၏ 158% မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်; သံပုရာအနံ့မှာ 127%; အုန်းသီးအနံ့မှာ 123%; အဖြူဆူညံသံမှာ 84%; အလင်းထွက်မှာ 23% ။
သို့သျောလညျး, ပုံ 1C တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွင်းအထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု dopamine တုံ့ပြန်မှု emitting အတွက်ကွဲပြားတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ neurochemical အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပြုအမူအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့က, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတင်ဆက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့အသီးအသီးကြွက်သွင်းယူ စားပွဲတင်2(ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစိတ်တပိုင်းဆုံးရှုံးမှုကြောင့်အရွယ်ရောက်သောကြွက်တစ်ကောင်အားဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်) ကျနော်တို့ထို့နောက်တစ်ခုချင်းစီကိုအသက်အုပ်စုအတွင်းလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်များနှင့် dopaminergic တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ Spearman nonparametric ဆက်စပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းမသက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု (ဒေတာမပြပါ, အားလုံး p တန်ဖိုးများ> 0.05) အဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်ရှိမရှိ၏, မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုမှာဖြစ်စေအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွက်အမူအကျင့် activation နှင့်ဆက်စပ်သောမခံခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့အမူအကျင့် နှင့်လှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောဓာတုတုံ့ပြန်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ကြဘူး။ ထို့အပြင် dopamine ယာယီများကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိသောကြွက်များ၏အပြုအမူရမှတ်များ (၃-၉ ​​ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ၁.၉ အရွယ်ရောက်သူများ) ကို dopamine ယာယီပြသခဲ့သည့်ကြွက်များ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအမှတ်များနှင့်လုံးဝထပ်တူကျအောင်လှုံ့ဆော်မှုကိုတင်ပြရန်အချိန် - သော့ခတ်ထားသည်။ သို့သော်အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်မှုအရဆယ်ကျော်သက်များသည်အုပ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်အရွယ်ရောက်ကြွက်များထက်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြမှုများတွင်သိသိသာသာလျော့နည်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြသခဲ့သည် (Mann-Whitney test, p <3) ။
အမူအကျင့်မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်မှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အဘို့ရမှတ် (0 မျှလှုပ်ရှားမှု =; 1 = sniffing / ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို;2= တိမ်းညွတ်လှုပ်ရှားမှု / ထိတ်လန့်;3= ရွေ့လျား) ။
လူမှုရေးအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်း Dopamine ယာယီ
နောက်ထပ်ကြွက်တစ်ကောင်နှင့်အတူ 60- s အပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းကျနော်တို့နောက်ထပ်ကျနော်တို့ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာ။ လူမှုရေးမဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်များနှင့်မတူဘဲဆုတ်ယုတ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက dopamine ယာယီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးကြွက်များ၌အခြားကြွက်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအပြန်အလှန်ပြုမှုစဉ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးပွားလာသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယာယီယာယီယာယီပျမ်းမျှနှုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် (၁.၀ ± ၃.၃ မှ ၃.၀.၉.၉.၂.၂.၂.၂.၂.၂.၂.၂.၂၂) သို့တိုးလာခြင်း၊ အခြေခံကနေ (၃) ဆတိုးလာခြင်း (ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များ၏ဆန့်ကျင်မှုနှင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု၊ p <3) နှင့် 1.0 ± 0.3 မှ 3.0 ± 0.9 တွင် လူကြီးများ (အပြန်အလှန် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူအခြေခံ၏ဝေါ့ဆနျ့ကငျြဘ, p <0.05) ။ ၁၀ မိနစ်အကြာတွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုသည်ကြွက်နှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံစဉ်ကတိုင်းတာခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် dopamine ယာယီနှုန်းတိုးလာခြင်းမရှိတော့ပါ (p> 2.0); ယာယီယာယီယာယီနှုန်း 0.5 ± 7.3 မှ 1.3 ± 0.001 ယာယီ / မိနစ်တိုးမြှင့်ပေမယ့်, ဒီပြောင်းလဲမှုကြွက်ကိုဖြတ်ပြီးပိုပြီး variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, မြီးကောင်ပေါက် 0.32 ± 1.8 ကနေ 0.5 ± 3.7 ယာယီ / min (p <1.3) ကနေပထမ ဦး ဆုံးစဉ်အတွင်းကဲ့သို့ဒုတိယတင်ဆက်မှုကာလအတွင်း dopamine ယာယီအတွက်တူညီတဲ့တိုးပြ။ ကြွက်များနှင့်အုပ်စုလိုက်အလိုက်ကြွက်များကိုပြသထားသည် ပုံ 2A.
တစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစား-လိုက်ဖက်ကြွက်နှင့်အတူအကျဉ်းအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ။ (က) Dopamine ယာယီအခြားကြွက် ( "Rat") သာရှိပြီးပြည်ပမှနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များပိုမိုမကြာခဏခဲ့ကြသည် ...
ကျနော်တို့ပထမနှင့်ဒုတိယအပြန်အလှန်ဇာတ်လမ်းတွဲစဉ်အတွင်းအပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဒုတိယအပြန်အလှန်ကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုး၏မရှိခြင်းကိုရှင်းပြမယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ စားပွဲတင်3သွင်းယူထားသည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ၄၅ စက္ကန့်အတွင်းလူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ရွေ့လျားခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအချိန်ကိုပြသည်။ ဒီစမ်းသပ်ခန်းထဲမှာ (၂၁ × ၂၁ စင်တီမီတာ) အကွာအဝေးရှိဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များသည်လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်အချိန်နည်းပါးသည်။ (၂- လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ - ANOVA: အုပ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ p <45) နှင့်ရွေ့လျားမှုတွင်အချိန်ပိုမို (၂- လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ) တိုင်းတာသည် ANOVA: အုပ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ p <21) အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက် သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွာခြားရန်နေရာပိုများပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသောကြွက်များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးကပ်မှုတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့်ပထမနှိုင်းယှဉ်ဒုတိယအပြန်အလှန်ကာလအတွင်းအတွင်း - အုပ်စုအပြုအမူနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဝေဖန်နှိုင်းယှဉ် T- စမ်းသပ်မှုတွဲခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမည်သည့်အသက်အရွယ်အုပ်စု (အားလုံး p တန်ဖိုးများ> 21) တွင်ပထမနှင့်ဒုတိယအပြန်အလှန်ကာလအကြားမျှအမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် dopamine ယာယီအကြွင်းမဲ့ကြိမ်နှုန်းမဟုတ်သလိုအခြေခံအနေဖြင့်တိုးမြှင့်အကြိမ်ရေ (အပြန်အလှန်ကာလအတွင်းလူမှုရေး interaction ကသို့မဟုတ်ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း (ဒေတာမပြပါ, အားလုံး p တန်ဖိုးများ> 2) မ။
အချိန် (s) ကိုအခြားကြွက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းလူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ရွေ့လျားအတွက်နေခဲ့ရသည်။
အခြားကြွက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်း dopamine ယာယီ၏အကျယ်ချဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအခြေခံစဉ်အတွင်းပြင်းအားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, နှစ်ဦးစလုံးအပြန်အလှန်ဖြစ်စဉ်များကနေဒေတာတွေကိုစာရင်းအင်းပါဝါတိုးမြှင့်ဖို့ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခဲ့ကြသည်။ ပုံ 2B dopamine ယာယီလွှဲခွင်၏ဖြန့်ဖြူး conspecific အပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ပိုမိုကြီးမားလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များဆီသို့ပြောင်းလဲခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားသ; ပျှမ်းမျှနှင့်ပျမ်းမျှ amplitude စာရင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်း စားပွဲတင် 1။ လူမှုဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများသည် voltammetric signal တွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆူညံသံအဆင့်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်နှစ်ခုလုံးတွင်အပြန်အလှန်ဖြစ်စဉ်များတွင်တွေ့ရှိရသည် (Wald ၏အခြေခံနှင့်အပြန်အလှန်နှိုင်းယှဉ်မှု၊ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက် p <0.05) ) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ signal-to-noise အချိုးသည်အုပ်စုများမှာမကွာခ။စားပွဲတင် 1Wald နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက p တန်ဖိုးများ> 0.05) သည်ဆူညံသံပြissuesနာများသည်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးကြွက်များအကြားတွင်ကွဲပြားခြားနားသောတွေ့ရှိချက်များကိုအထောက်အကူမပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအားလုံးအသံသွင်းခြင်း, NAc ၏အဓိကထားခဲ့ကြသည် ပုံ 3.
နျူကလီးယပ်အတွင်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုမှတ်တမ်းတင် Dopaminergic ထံမှအဆင်ပြေအောင် (bregma မှ 1.2 နှင့် 1.6 မီလီမီတာ anterior မှာကိုယ်စားလှယ် Coronal ချပ်ပေါ်တွင်ပြသ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏အမာခံ accumbens Paxinos နှင့် Watson, 1986).
Dopamine neurotransmission လှုံ့ဆော်မှု salience, ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီခြင်းအပါအဝင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများစွာကိုရှုထောင့်မှအဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားမတူသည့်အတိုင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်အစာရှောင်ခြင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များစစ်တမ်းကောက်ယူ။ ကျနော်တို့ dopamine ယာယီ၏ Basal နှုန်းထားများနှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားပါဘူးစဉ်လူကြီးများမှနှိုင်းယှဉ်ပါက, မမျှော်လင့်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ယာယီဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နည်းပါးလာဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့ပါ။ ဆနျ့ကငျြ, dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အလွှဲခွင်နှစ်ခုလုံးကိုအခြားကြွက်နှင့်အတူအပြန်အလှန်မှာနှစ်ဦးစလုံးအသက်အုပ်စုများအတွက်ကိုတိုးမြှင်; သို့သော်အကြိမ်ရေအတွက်အပြောင်းအလဲဖက်ကြွက်၏ဒုတိယတင်ဆက်မှုမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသော်လည်းမမြီးကောင်ပေါက်အတွက် habituates ။ ထို့ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်မှာအစာရှောင်ခြင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များလူကြီးများနှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ကွဲပြား, ဤဇီဝကမ္မခြားနားချက်လူမှုရေးနှင့် nonsocial လှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အသက်အရွယ်-မှီခိုကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
နှင့်လူကြီး (အသက် 29 - 30 ရက်) - ထို NAc core ကိုအတွက် dopamine ယာယီနှစ်ယောက်စလုံးကြိမ်နှုန်းနှင့် amplitude အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (71 ရက်ပေါင်းအသက်အရွယ် 72) တွင်အထီးကြွက်အကြားအလားတူခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ထုံဆေးကြွက်များတွင် dopamine အာရုံခံ၏ electrophysiological အသံသွင်းနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ dopamine အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်း (လူကြီးကိုဖြတ်ပြီးကျဆင်းပြီးတော့, နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှကလေးမွေးဖွားထံမှတိုးမြှင့်Pitt et al ။ , 1990; Tepper et al ။ , 1990; Lavin နှင့် Drucker-ဖြစ်သူ Colin, 1991; Marinelli et al ။ , 2006; McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009), အထွတ်အထိပ်လှုပ်ရှားမှုနှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှနှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်အတူ။ တကယ်ပါပဲ, McCutcheon နှင့် Marinelli (2009) Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်ပစ်မှတ်ထားအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်မှာအလားတူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်, နှင့်ဒေတာဤနေရာတွင် dopamine ယာယီ dopamine အာရုံခံ (၏ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်အထဲကပေါ်ထွန်းအဖြစ်အာရုံခံကွဲ၏နှုန်းထားများလည်းအလားတူဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုSuaud-Chagny et al ။ , 1992; လေးလံနေတာတွေ့နေရ et al ။ , 2009) ။ အထူးသ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်အနည်းငယ်နှင့်အတူဆိုက်များမှတစ်မိနစ်လျှင်အများအပြားနှင့်အတူဆိုဒ်များရန်မလိုအလြောကျယာယီအထိ dopamine ယာယီ၏ Basal အကြိမ်ရေအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (အရွယ်ရောက်သူများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်အလားတူဖို့ "ပူ" နှင့် "အအေး" အသံဖမ်းက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ပါသည်ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2009; Robinson နဲ့ Wightman, 2007; Wightman et al ။ , 2007) နှင့် dopamine အာရုံခံ၏ပြင်းစွာတိုက်နှုန်းထားများအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ (Hyland et al ။ , 2002) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှင့်ကိုက်ညီ, microdialysis လေ့လာမှုများ (အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်လူကြီးနှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (အသက်၏ 45 ရက်ပေါင်း) တွင်တိုးမြှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီBadanich et al ။ , 2006; Philpot et al ။ , 2009) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြား dopamine ယာယီ၏ Basal နှုန်းထားများ၏ပထမဆုံးအကဲဖြတ်ပေးနေချိန်မှာ dopamine ယာယီနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ်ထို့ကြောင့်ပို timepoints ဒီပြောင်းလဲနေသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းလိုအပ်နေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာနှင့်ကိုက်ညီ (Robinson နဲ့ Wightman, 2004), ကျနော်တို့ dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းအချိန်သော့ခတ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကနဦးတင်ဆက်မှုမှမကြာခဏအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများမျှော်လင့်မထားတဲ့တင်ဆက်မှုမှာတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောသူတို့အားအလားတူအနံ့နှင့်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုဆောင် ခဲ့. , နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်ဤလှုံ့ဆော်မှုတိရစ္ဆာန်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများအလားအလာ salience တစ် neurochemical signal ကိုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သော Basal နှုန်းထားများအထက်ပါ NAc အတွက် dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လူကြီးများထက်လှုံ့ဆော်မှုမှလျော့နည်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပြထားတဲ့အတိုင်းသို့သော်လူကြီးများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလှုံ့ဆော်မှုများမျှော်လင့်မထားတဲ့တင်ဆက်မှုတုံ့ပြန် dopamine ယာယီအကြိမ်ရေအတွက်တိုးအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်, နှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ NAc core ကိုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ dopaminergic အာရုံခံ၏ phasic activation တိကျတဲ့မော်တာလှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းမပါပေမယ့်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နှင့် dopamine ယာယီမြှင့်တင်ရန်လေ့ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများကိုမကြာခဏ (အမူအကျင့်ကို Activation လုပ်ရန်ဆွဲဆောင်လေ့Nishino et al ။ , 1987; Romo နှင့် Schultz, 1990; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002) ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် dopaminergic နှင့်နှစ်ဦးစလုံးဟာဆယ်ကျော်သက်ကြွက်ဤလှုံ့ဆော်မှု၏ salience တစ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှု, ဤအမျိုးအစားမှအမူအကျင့်အပေါ်တုံ့ပြန်သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခြားနားချက်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကြွက်လူမှုရေးအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းစက်ခေါင်းများနှင့်လူမှုရေးအရညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးပြအဖြစ်အရေးကြီးလှုံ့ဆော်မှုဖို့လျှော့ချအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု, ရိုးရှင်းစွာ (ထို tethering သို့မဟုတ် voltammetric headstage ဖို့ဖြစ်ကောင်းကြောင့်) ရွှေ့ဖို့နိုင်စွမ်းအတွက်လျော့ချရေးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထိုမှတပါး, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကြွက်ကိုဖြတ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါလှုံ့ဆော်မှုမှ dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့ရှိ၏။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့မမျှော်လင့်ဘဲ, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုရန်ဆွေမျိုးအာရုံမခံစားနိုင်သော, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်မကြာခဏလူကြီးများ (ဥပမာထက်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထု၏ရှာဖွေရေး၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းပြကြောင်းကြိုတင်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ခြားနား ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003; Stansfield နှင့် Kirstein, 2006; Philpot နှင့် Wecker, 2008အသက် 35 ရက်ပေါင်း -), Mid-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (36 အတွက်ကြွက်များတွင်အထွတ်အထိပ်မှအစီရင်ခံသည်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုရှာဖွေရေးနှင့်အတူ လှံကို et al ။ , 1980) ။ အပိုဆောင်းလေ့လာမှုများအမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုအဖြစ်အကျွမ်းတဝင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသို့ထားရှိဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ငြိမ်, ဝတ္ထုတ္ထုမှတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအကျဉ်းချုပ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များအားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်ပြိုင်တည်းပါ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များအကြား ontogenetic ကွဲပြားခြားနားမှုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်ပါလိမ့်မယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအုပ်စုများအတွက်အခြားကြွက်နှင့်အတူအကျဉ်းအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းတိုးလာသည့် NAc core ကိုအတွက် dopamine ယာယီ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အလွှဲခွင်နှစ်ဦးစလုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အစီရင်ခံစာနှင့်ကိုက်ညီ (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002), အ conspecific ကြွက်၏ဒုတိယတင်ဆက်မှုမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် habituated အဆိုပါ dopaminergic တုံ့ပြန်မှု။ ဆနျ့ကငျြ, dopamine ယာယီ၏တိုးလာအကြိမ်ရေဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ လေ့၏ဤမရှိခြင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် (ဥပမာ, နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပြသလူမှုရေးအပြန်အလှန်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ဒေါက်ဂလပ် et al, 2004) ။ အမှန်စင်စစ်, လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု (နောက်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ်မှကြွက်များစမ်းသပ်ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ရက်ကာလအဘို့အိုင်ဆိုလိတ်-သျောကြသောအခါဝါကြွားကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသထားသည်Varlinskaya & လှံ, 2008), အဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာနှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများယေဘုယျရွေ့လျားသာရှိပြီးပြည်ပမှလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏ခြုံငုံငွေပမာဏအပေါ်ကွဲပြားပါတယ်။ ယခင်အစီရင်ခံစာများအကြောင်းအိုင်ဆိုလိတ်-သျောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များကဤဆိုးကျိုးများအထူးသဖြင့်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် (အကြားအသံထွက်ခံရအတူ discrete လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းလူကြီးများထက် ပို. လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်ရွေ့လျားပြညွှန်ပြနေချိန်တွင်Varlinskaya & လှံ, 2008), ကျနော်တို့ရွေ့လျားပိုမိုမြင့်မားခဲ့နှင့်လူမှုရေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူဟာသူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ counterparts တွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီးအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တို့ကြောင့်အဆိုပါယန္တရား၏အရွယ်အစားမှဖြစ်နိုင်သည်: 21 × 21 စင်တီမီတာမှာ, ပိုကြီးတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ကဤအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရစ္ဆာန်များအဘို့လူမှုရေးအဆက်အသွယ်နီးပါးမလွှဲမရှောင်အောင်, အသေးငယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များထက် conspecific မိတ်ဖက်ဖို့နီးကပ်နီးကပ်အတွက်ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, tethered သာစမ်းသပ်ကြွက်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ကာလအတွင်းယင်း၏အမူအကျင့် repertoire ထိခိုက်ခဲ့ကြပေမည်ရှိခြင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောအပြန်အလှန်၏တိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတွင်း (60 s) ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကြွက်လူမှုရေး interaction က၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသုံးပြုသောကြာကြာအပြန်အလှန်ကာလ (270-600 s) ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလူမှုရေးအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်-related ပုံစံများထုတ်လုပ်ရသောသာကနဦး interaction ကဖမ်းယူ (ဥပမာ, Varlinskaya & လှံ, 2008; Glenn et al, 2003).
အဆိုပါ headstage စည်းဝေးပွဲကိုအခနျးမြို့ရိုးကိုသို့မဟုတ်လူမှုရေးအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်း dopamine ယာယီအကြိမ်ရေများအထင်သေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောအခြားကြွက်ထိအဖြစ်လူမှုရေးအပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှု-ဆက်စပ်လျှပ်စစ်ဆူညံသံသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးအချက်ပြမှုမှဆူညံသံအဆင့်ဆင့်ဒုတိယအပြန်အလှန်ကာလအတွင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိ dopamine ယာယီအကြိမ်ရေအတွက်မြဲတိုးနေတဲ့ဆူညံသံ-related ရှေးဟောင်းပစ္စည်းမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, အသက်အုပ်စုများအကြားဒါမှမဟုတ်ပထမနှင့်ဒုတိယအပြန်အလှန်ကာလအကြားကွဲပြားခြားနားသောကြဘူး။ အမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုလည်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြား dopaminergic တုံ့ပြန်မှုလေ့အတွင်းကွာခြားချက်ကိုရှင်းပြကြဘူးဒါကြောင့်အလားတူပင်စုံစမ်းခြင်းနှင့် locomotor အပြုအမူ, အသီးအသီးအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွင်းနှစ်ဦးစလုံးအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တူညီခဲ့သည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုမှာ (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002), အလေ့လာရေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ဟာ dopamine ယာယီမိတ်ဖက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, နည်းပါးလာ dopamine ယာယီ emitting ရှိနေသော်လည်းတနာတစ်ဦးကြွက်နှင့်အတူတစ်စက္ကန့်အပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းပိုပြီးပြင်းထန်လူမှုရေးအရညွှန်ကြားအပြုအမူတွေပြသကြောင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ dopamine ယာယီဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏အချက်ပြမှုများအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနေတယ်ဆိုရင် (Schultz နှင့် Dickinson, 2000; Schultz, 2007; Roesch et al ။ , 2010), ထပ်ခါတလဲလဲမိတ်ဖက်တင်ပြချက်များမှလူကြီးများအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ၏လေ့အကျိုးကိုအတွက်ကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယတင်ဆက်မှုပိုမိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် dopamine လွှတ်ရာဇွဲတနာတစ်ဦးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲအပြန်အလှန်ဖို့ပိုကောင်းဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အံ့အားသင့်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ။
အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်ကအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများနှင့်ဆုလာဘ်ဝယ်ယူပါဝင်ပတ်သက်နေသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ Depue နှင့် Iacono, 1989; Panksepp, 1998; Depue နှင့် Collins, 1999; Ikemoto နှင့် Panksepp, 1999; Schultz နှင့် Dickinson, 2000; Schultz, 2007) ။ ဒီ dopamine လမ်းကြောင်းအများအပြားရှုထောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများခံယူကြောင့်ကောင်းစွာဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအလိုငှါဆုလာဘ်များနှင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှုကိုမြင်ရ, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဘို့ (စပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ကုန်သည်များ et al ။ , 2003; Ernst et al ။ , 2009; Wahlstrom et al ။ , 2010b; Wahlstrom et al ။ , 2010a) ။ လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဖို့ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် habituate မကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် (ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ကိုးကားဘို့တွေ့လူမှုရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်မှကြီးထွား sensitivity ကို, မှတ်တမ်းတင်ကြပြီအများအပြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် Doremus-Fitzwater et al, 2010; လှံတော်နှင့် Varlinskaya, 2010) ။ novel လှုံ့ဆော်မှုထိုနည်းတူအဓိကဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောကြောင့်, dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, သို့သော်ကျနော်တို့အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု၏အကျဉ်းတင်ဆက်မှုမှတိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလူမှုရေးဆုလာဘ် sensitivity ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မဟုတ်သောအရာစဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန် (အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) မှာ dopamine လွှတ်ပေးရန်နမူနာကြပေမည်။ ဤသည်အနက်ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးပိုပြီး timepoints မှာဝတ္ထုနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုမှ dopamine လွှတ်ပေးရေးစာမေးပွဲအပါအဝင်နောက်ထပ်သုတေသနအတော်ကြာ Avenue, စေပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း (သူတို့ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရသောအခါဤသို့သောအလင်းသို့မဟုတ်အနံ့အဖြစ်ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြချက်များ, အမျိုးအစားများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်တစ် dopaminergic တုံ့ပြန်မှုကျလာသောနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် dopamine ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ cue-ဆုလာဘ်ကာလအတွင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သင်ယူခြင်း (ဥပမာ Pavlovian အေးစက်) စုံစမ်းရန်စီစဉ်ထားနေ့ et al, 2007; Roesch et al ။ , 2007).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ, သို့မဟုတ် dopamine ယာယီအစာရှောင်ခြင်း, differential လူကြီးနှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ယာယီ၏နှုန်းထားများနှင့်ပြင်းအားအခြေခံမှာအလားတူခဲ့ကြသည်နေချိန်မှာကျနော်တို့ dopamine မမျှော်လင့်ဘဲ, nonsocial လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်လွှတ်ပေးရန်နှင့်လူကြီးများမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ပိုပြီးမြဲ activation ၏လျော့နည်း activation လေ့လာသည်။ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုဖွယ်ရှိ, တွေကိုနှင့်ဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဖို့အထူးသဖြင့်လူမှုရေးဆုလာဘ်ကူညီသည်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပိုပြီး timepoints အကဲဖြတ်အဖြစ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သင်ယူမှုစဉ်အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ထိုအတွေ့ရှိချက်အပေါ်တည်ဆောက်ရန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်လိမ့်မည်။
neuroanatomical သြဒီနိတ်နှင့်အတူအကူအညီအတွက်ဒေါက်တာသောမတ်စ် Guillot III ကိုရန်, အမူအကျင့်အမှတ်ပေးဘို့ရာခေလသည်ဟေနှင့် Sebastian Cerdena ရန်, လျှပ်ကူးပစ္စည်းစံကိုက်ညှိဘို့ Vahid Sanii ရန်, နှင့်လူမှုသိပ္ပံသုတေသနများအတွက် UNC မှ Odum တက္ကသိုလ်က Chris Wiesen မှကျေးဇူးတင်ပါသည်စာရင်းအင်းကျွမ်းကျင်မှုသည်။ ဤလုပ်ငန်းကို NIH (LPS မှ R01DA019071) နှင့်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှအရက်လေ့လာရေးများအတွက် Bowling Centre ကိုတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Andersen က SL, Rutstein M က, Benzo JM, Hostetter JC, Teicher MH ။ dopamine အဲဒီ receptor overproduction နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuroreport ။ 1997;8: 1495-1498 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ အမေရိကန် J ကို Psychiat ။ 2003;160: 1041-1052 ။
နေ့ JJ, Roitman MF, Wightman RM, Carelli RM ။ Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2007;10: 1020-1028 ။ [PubMed]
Depue RA, Iacono WG ကို။ အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်၏ Neurobehavioral ရှုထောင့်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 1989;40: 457-492 ။ [PubMed]
Depue RA, Collins က PF ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ Neurobiology: dopamine, မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း, extraversion ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံပြုမူနေ။ 1999;22: 491-517 ။ ဆွေးနွေးမှု 518-469 ။ [PubMed]
Doremus-Fitzwater TL, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုအဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010;72: 114-123 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ဝတ္ထု-အရာဝတ္ထုရာအရပျအေးစက်: လူမှုရေးအထီးကျန်ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2003;80: 317-325 ။ [PubMed]
ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေး interaction က၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဂုဏ်သတ္တိများ: ဘာသာရပ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အိုင်ဆိုလိတ်အိုးအိမ်သာရှိပြီးပြည်ပမှလူမှုရေး၏သက်ရောက်မှု။ dev Psychobiol ။ 2004;45: 153-162 ။ [PubMed]
Ernst M က, Romeo RD, Andersen က SL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Neurobiology: တစ်အာရုံကြောစနစ်များမော်ဒယ်သို့ပြတင်းပေါက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93: 199-211 ။ [PubMed]
Glenn RF, Tucci လုပ် SA, သောမတ်စ်တစ်ဦးက, Edwards က je, ဖိုင်မှတ်တမ်း SE ။ စိုးရိမ်စိတ်နှစ်ခုတိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုအတွက်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့တုံ့ပြန်အသက်အရွယ်-ဆက်စပ်လိင်ကွဲပြားမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003;27: 155-161 ။ [PubMed]
အဆိုပါလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားကြွက်များတွင် midbrain dopamine ဆဲလ်၏ Modes သာပစ်ခတ် Hyland BI, Reynolds ကဖြစ်မှု, ဟေ J ကို, အခွင့်အရေး CG, Miller က R. ။ neuroscience ။ 2002;114: 475-492 ။ [PubMed]
Ikemoto S က, Panksepp ဂျေနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် dopamine accumbens: အထူးရည်ညွှန်းအတူစညျးလုံးအနက်ကိုဆုချစားမှုရန်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1999;31: 6-41 ။ [PubMed]
Lavin MA, အိုမင်းအပေါ် adrenal medullary အစားထိုးခြင်းနည်းပညာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအထူးရည်ညွှန်းနှင့်အတူ dopaminergic ဆဲလ်များ၏ electrophysiological လှုပ်ရှားမှု Drucker-ဖြစ်သူ Colin R. Ontogeny ။ ဦးနှောက် Res ။ 1991;545: 164-170 ။ [PubMed]
Logman MJ, Budygin EA ၏, Gainetdinov RR, Wightman RM ။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ microelectrodes နှင့်အတူအတွက် Vivo တိုင်းတာ quantitative ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ။ 2000;95: 95-102 ။ [PubMed]
Marinelli M က, Rudick CN, Hu XT, အဖြူရောင် FJ ။ dopamine အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်: မော်ဂျူနှင့်ဇီဝကမ္မအကျိုးဆက်များ။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2006;5: 79-97 ။ [PubMed]
McCutcheon je, Marinelli အမ်ခေတ်ကိစ္စရပ်များ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009;29: 997-1014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nishino H ကို, Ono T က, Muramoto K သည်, ဖူကူ M က, မျောက်အတွက်နို့တိုက်ကျွေးမှုလှုံ့ဆော်မှုဘားစာနယ်ဇင်းစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် Sasaki K. အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1987;413: 302-313 ။ [PubMed]
Panksepp ဂျေ အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience: လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်စိတ်ခံစားမှု၏အမြစ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1998 ။
Paxinos, G, Watson ဟာ C. stereotaxic သြဒီနိတ်ထဲမှာကြွက်ဦးနှောက်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ; နယူးယောက်: 1986 ။
Phillips က PE, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM, Carelli RM ။ Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝ။ 2003;422: 614-618 ။ [PubMed]
Philpot RM, တုံ့ပြန်မှု phenotype နှင့်ယန္တရားမှုကြီးလျှော့ချသက်ရောက်မှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ Wecker အယ်လ်မူတည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2008;122: 861-875 ။ [PubMed]
Philpot RM, Wecker L ကို, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထပ်ခါတစ်လဲလဲအီသနောထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယကနေ dopaminergic output ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း septi accumbens ပွောငျးလဲ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2009;27: 805-815 ။ [PubMed]
Pitt DK, Freeman က AS, Chiodo LA က။ Dopamine အာရုံခံဆဲလျ ontogeny: electrophysiological လေ့လာမှုများ။ synapses ။ 1990;6: 309-320 ။ [PubMed]
Rebec GV, Christensen JR, Guerra က C, Bardo MT ။ အခမဲ့-ရွေးချယ်မှုအသစ်အဆန်းစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် Real-time dopamine efflux အတွက်ဒေသတွင်းနှင့်ယာယီကွဲပြားခြားနားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1997;776: 61-67 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Wightman RM ။ Nomifensine လွတ်လပ်စွာ-ရွေ့လျားကြွက်များ၏ ventral striatum အတွက် subsecond dopamine အချက်ပြမှုများကိုချဲ့ထွင်။ J ကို Neurochem ။ 2004;90: 894-903 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Heien ML, Wightman RM ။ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုယာယီ၏ frequency dorsal နှင့် conspecifics ၏နိဒါန်းစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်၏ ventral striatum အတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 10477-10486 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Herman တစ်ဦးက, Seipel ကို AT, Wightman RM ။ အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာ Rapid ဓာတုဆက်သွယ်ရေးစောင့်ကြည့်။ Chem ဗျာ 2008;108: 2554-2584 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Howard EC, McConnell က S, Gonzales RA, Wightman RM ။ ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်လုပ်သူများနှင့် phasic အီသနော-သွေးဆောင် dopamine တိုးအကြားကွာဟမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2009;33: 1187-1196 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Phillips က PE, Budygin EA ၏, Trafton BJ, Garry PA ဆိုပြီး, Wightman RM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း accumbal dopamine အတွက် sub-ဒုတိယအပြောင်းအလဲများကို။ Neuroreport ။ 2001;12: 2549-2552 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Wightman RM ။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက်လျင်မြန်စွာ dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ခုနှစ်တွင်: မိုက်ကယ် AC အ, Borland LM, အယ်ဒီတာများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ electrochemical နည်းလမ်းများ။ စီအာစီစာနယ်ဇင်း; Boca Raton: 2007 ။ စစ။ 17-34 ။
Roesch MR, Calu DJ သမား, Esber ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Schoenbaum G. အခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများအချက်ပြမှုများကနေ ... dissociating အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းဝါဝါကြောင်းအားလုံး။ J ကို Neurophysiol ။ 2010;104: 587-595 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roesch MR, Calu DJ သမား, Schoenbaum G. အ Dopamine အာရုံခံကွဲပြားခြားနားနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်သုံးနိုင်ဆုလာဘ်များအကြားဆုံးဖြတ်ခြင်းကြွက်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဝှက်။ နတ် neuroscience ။ 2007;10: 1615-1624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roitman MF, ဝီ RA, Wightman RM, Carelli RM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် real-time ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုခွဲခြား။ နတ် neuroscience ။ 2008;11: 1376-1377 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roitman MF, Stuber GD, Phillips က PE, Wightman RM, Carelli RM ။ Dopamine အစားအစာရှာတဲ့ subsecond modulator တွေကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 1265-1271 ။ [PubMed]
Romo R ကို, ထိုမျောက် midbrain ၏ Schultz ဒဗလျူ Dopamine အာရုံခံ: Self-အစပျိုးလက်မောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းမှာတက်ကြွစွာတို့ထိရန်တုံ့ပြန်မှုများပေါ်ဖြစ်ပေါ်။ J ကို Neurophysiol ။ 1990;63: 592-606 ။ [PubMed]
ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာ Schultz ဒဗလျူအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2007;30: 259-288 ။ [PubMed]
Schultz W က, ခန့်မှန်းအမှား Dickinson အေအာရုံခံနိုင်တဲ့ coding ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2000;23: 473-500 ။ [PubMed]
လေးလံနေတာတွေ့နေရ LA က, Beyene M က, Carelli RM, Wightman RM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine ၏ Synaptic လျတ်အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုကနေပေါ်ပေါက်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 1735-1742 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လှံကို LP သို့ Varlinskaya EI ။ အီသနောနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အခြား hedonic လှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity: ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသိပ္ပံအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေ? dev Psychobiol ။ 2010;52: 236-243 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လှံကို LP သို့ Shalaby IA, ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း haloperidol ၏အုတ်ဂျေနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး: အမူအကျင့်များနှင့် psychopharmacological ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacol ။ 1980;70: 47-58 ။
Stansfield KH, Kirstein CL ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အပြုအမူအပေါ်အသစ်အဆန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ dev Psychobiol ။ 2006;48: 10-15 ။ [PubMed]
Stuber GD, Wightman RM, Carelli RM ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးသုဉ်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် function နှင့်ယာယီကွဲပြား dopaminergic အချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005a;46: 661-669 ။ [PubMed]
Stuber GD, Roitman MF, Phillips က PE, Carelli RM, Wightman RM ။ ဆက်ပြောပါတယ်နှင့် noncontingent ကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်အချက်ပြ Rapid dopamine ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005b;30: 853-863 ။ [PubMed]
Suaud-Chagny MF, Chergui K ကို Chouvet, G, ထိုကြွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအမိုင်နိုအက်ဆစ် Vivo လျှောက်လွှာအတွက်ဒေသခံစဉ်အတွင်း dopaminergic အာရုံခံ၏ဥတုလှုပ်ရှားမှုအတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်အကြား Gonon အက်ဖ်ဆက်ဆံရေး။ neuroscience ။ 1992;49: 63-72 ။ [PubMed]
Tepper JM, Trent က F, ကြွက် nigrostriatal dopaminergic အာရုံခံ၏လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု Nakamura အက်စ် Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1990;54: 21-33 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်: လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသက်ရောက်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတွင်ကျွမ်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2008;188: 398-405 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wahlstrom: D, White, T, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dopamine စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမှုများများအတွက် Luciana အမ် Neurobehavioral သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010a;34: 631-648 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wahlstrom: D, Collins P ကို, White, T, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine neurotransmission အတွက် Luciana အမ် Developmental အပြောင်းအလဲများကို: အကဲဖြတ်အတွက်အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြဿနာများကို။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010b;72: 146-159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wightman RM, Heien ML, Wassum KM, လေးလံနေတာတွေ့နေရ LA က, Aragona BJ, Khan က AS, Ariansen JL, ရူ့ JF, Phillips က PE, Carelli RM ။ Dopamine လွှတ်ပေးရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens ၏ microenvironments အတွင်းပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007;26: 2046-2054 ။ [PubMed]
Wightman RM, ရော်ဘင်ဆင်သည် DL ။ ယာယီ mesolimbic dopamine ပြောင်းလဲမှုများနှင့် '' ဆုလာဘ် '' နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့ J ကို Neurochem ။ 2002;82: 721-735 ။ [PubMed]